Gunyana 7, 2018 arun
Dare China anoziva blockchain uchapupu sezvo zviri pamutemo tichisunga
Blockchain zvino zvinogona zviri pamutemo kushandiswa tsvagurudza uchapupu pamutemo kusawirirana mu China, maererano nyika Supreme Court. Dare akasunungura mitemo itsva neChishanu - kuti kutora chakonzerwa - kugadzirisa nyaya dzakasiyana chokuita sei Indaneti matare China vanofanira kudzokorora pamutemo kusawirirana.
Chikamu murau itsva kutaura kuti Indaneti matare China kuti vanoziva blockchain sezvo nzira nomutemo kuchengeta uye authenticating digitaalinen uchapupu, inopiwa kuti mapato vanogona kuratidza nekodzero mabikirwo kushandiswa pakuitika. Mutongo anouya pakupindura mibvunzo yakasiyana-siyana kuti yakabuda kubva munyika akasimbisa Internet mudare rayo rokutanga Hangzhou gore rapera - munhu achiita nharo kumativi internet anotsanangura nyaya, Kazhinji chokuita digitaalinen Data.
Australian Gwaro kushandisa pamusika mitemo kune crypto exchanges
A pamusoro Australian zvemari regulator yataura zvichatora kutora nzira itsva kana yokudzora cryptocurrency exchanges, uyewo sungisa nekushandiswa kwokutanga yesimbi zvinopiwa (ICOs). In yacho yemakambani zano 2018-2022, akasunungura nhasi, ari Australian kuchengetedzeka uye Investments Commission (ASIC) akataura nzvimbo yayo kuti pfungwa, ndiko kuramba “vachiongorora nokutyisidzirwa zvakaipa kubva zvichiitika zvinogadzirwa” akadai ICOs uye cryptocurrencies.
Uyezve, nokuti 2018 uye 2019, ASIC akati zviri kuva urongwa itsva muchashandisa “nhungamiro nokuti yokudzora musika kwezvivako rubatsiro kune crypto exchanges” uye achapindira kupi “pane murombo maitiro uye zvinogona kukuvadza vatengi uye makambani.”
Goldman CFO anoramba mishumo zvakasimba ditching crypto wokutengesera dhesiki
Kwekutanga svondo rino, Business Insider yakashuma kuti Goldman Sachs akanga nixing nokuumba Bitcoin wokutengesera dhesiki. Zvinonzi nokuda pamutemo nyaya uyewo kuva yepamusoro kukoshesa, eg. crypto ubatwa basa. Asi nenguva San Francisco kwakaita TechCrunch bvoronga Conference, Goldman Sachs 'CFO Martin Chavez ataura kuti mishumo imwe rollback kubva zvokutengeserana dhesiki kuitira cryptocurrencies akanga nyepera nhau. “Ndinofunga mumwe zvinoshamisa pamusoro pedu ndechokuti isu kuti zvakanyorwa pamusoro zvakawanda. Handina kumbofunga ndinoda kunzwa pachangu kushandisa iri izwi asi ini here kutsanangura kuti nhau sezvo Fake nhau.”
Chavez zvakare anoti sei ubanguranyika pamusoro digitaalinen zvinhu zvakanga chinhu kuti "kwaizoratidzwa Virtual pamusoro nguva." Sezvo May, Goldman Sachs yave yokururamisa Bitcoin-chokuita neramangwana zvibvumirano zvinopiwa pedyo CBOE uye CME. zvimwe, kubhangi achiri zvikuru kufunga sei nemhosva mubereko kana totaura chaivo dzeEurope.
Winklevoss hama ndiwane bvumidzwa nokuda crypto anokosha okuchengetera hurongwa
Crypto Exchange Gemini havaoni Cameron uye Tyler Winklevoss kunge akava bvumidzwa kuti chekuchengeta nzira inotonhora chokuita makombiyuta mhepo-gapped, inoona nezvenjodzi kure hwakavigwa mumakamuri, epurasitiki makadhi, dzimwe nguva, enhokwe. The bvumidzwa ine urongwa kuva richikurukura makombiyuta vanokwanisa generating nyaya kuchengeta cryptocurrencies kana cryptocurrency-chokuita Exchange-mhindu zvigadzirwa (ETPs). Sechikamu chokumbofanobata chiyero, kuti makombiyuta kuti nevamwe kunze kana zvakakodzera kuti uchatamisa midziyo, chaizvoizvo kuita sezvo kuchitonhora chekuchengeta mudziyo.
The makombiyuta kuti vaunze makiyi aya nyaya itsva, izvo zvaizoita kuti segmented muzvikamu uye zvakanyorwa pana ane zvekunze ndangariro mudziyo, akadai nokupenya nemotokari, CD, DVD kana zvakanyorwa pasi panyama mugomo kadhi laminated, papepa, piece mapurasitiki kana kunyange yenhokwe, maererano gwaro. The makombiyuta kuti kuwana yakachengeteka portal, izvo aigona, Kana zvakakodzera, kubatanidza michina kune blockchain rezvebonde kuti ribude kwema, gwaro rinotsanangura.
Kraken Daily Market Mushumo 06.09.2018
$250M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Blockchain News 11 Ndira 201...
Previous Post:Blockchain News 06.09.2018
Next Post:Blockchain News 10.09.2018